XOG, Qodobbo xasaasi ah oo looga wada hadlay Kulan dhexmaray midawga musharaxiinta iyo Beesha caalamka (AQRISO). – Soomaali 24 Media Network
XOG, Qodobbo xasaasi ah oo looga wada hadlay Kulan dhexmaray midawga musharaxiinta iyo Beesha caalamka (AQRISO).
Posted on April 27, 2021 Leave a Comment on XOG, Qodobbo xasaasi ah oo looga wada hadlay Kulan dhexmaray midawga musharaxiinta iyo Beesha caalamka (AQRISO).
Xog muhiim ah oo laga helay shir dhexmaray midawga musharixiinta iyo beesha caalmka ayaa sheegaysa, in midawga musharixiintu ay hordhigeen beesha caalmka ashtako ka dhan ah madaxwayne Farmaajo oo ay ku tilmaameen in uu yahay madaxwayne aan sharci haysanin caqabadna ku ah amaanka dalka.
Kulankaan oo ay beesha caalmku dalbatay, ayay midawga musharixiintu sheegeen in Villa Soomaaliya ay noqotay goob laga soo weeraro madaxda dalka iyo musharixiintaba, iyada oo ay Amisom ilaalinayso Villa Soomaaliya.
Maxay tahay sababta ay Amisom u ilaalinayso, shaqsi aan sharci ku fadhin Villa Soomaaliya, islamarkaana weerar ku ah xasiloonida iyo amniga dalka, diidayna in uu dalka doorasho gaarsiiyo? ayay ku yiraahdeen midawga musharixiintu xubnaha beesha caalmka,
Safiirada beesha caalmka oo dhankooda hadlay ayaa u sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda sii xumaanaysa ee Muqdisho, oo ay dadaal ugu jiraan sidii ay dhinacyada ugala hadli lahaayeen in ay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato ku noqon kara amniga caasimadda.
Waxaa ay intaas ku dareen in ay sugayaan ergayga gaarka ah ee midawga afrika u soo dirayaan Soomaaliya oo dhawaan soo gaaraya magaalada Muqdisho, kaas oo la kulmi doona dhinacyada isku haya siyaasadda dalka, kadibna wixii uu halkaas kala kulmo u gudbin doona Golaha amniga iyo nabadda midawga Afrika.
Ujeedada ugu wayn ee midawga musharixiinta ayaa ahayd sida ay sheegeen inay beesha caalamka weydiiyaan sharciyadda ay ku ilaalinayaan madaxwayne Farmaajo oo aanay u ilaalinaynin madaxdii ka horeeysay ee xilalka soo qabatay ee loo adeegsanayo cidamadii qaranka ee ay ahayd in ay amniga muwaadiniinta sugaan?.
Waxaa ay dalbadeen in ay muhiim tahay in wax laga badalo siyaasadda ciidamadda Amisom ee xilligaan kala guurka iyo in ay dhexdhexaad u noqdaan madaxda dalka.
← DEG DEG, Dawladda Maraykanka oo si adag uga hadashay xiisadaha ka taagan Muqdisho (AQRISO).
Maxaa keenay in madaxweyne Farmaajo ka laabto go’aankii muddo kororsiga? (AQRISO) →